यौन क्षमता र यौन चाहना कम हुनु पनि निसन्तानको कारण हुनसक्छ – Etajakhabar
यौन क्षमता र यौन चाहना कम हुनु पनि निसन्तानको कारण हुनसक्छ
काठमाडौँ । महिला वा पुरुषमा प्रजनन क्षमता हुँदाहुँदै पनि सन्तान उत्पादन नभए निःसन्तान भनिन्छ । निःसन्तानको समस्या नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भयावह अवस्था छ । ती देशहरूमा एक सय महिलामा १५ जना महिलाले सन्तान जन्माउन सकेका छैनन् । विवाहित दम्पतीले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगरी दुई वर्षसम्म सँगै बस्दा पनि सन्तान भएको छैन भने निःसन्तान भएको भन्न सकिन्छ । तर, बिहे गरेर दुई वर्षसम्म सँगै बसेकै छैन भने निःसन्तान भन्न मिल्दैन ।
भोला रिजाल स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ नेपालमा अझै पनि १५ प्रतिशत विवाहित दम्पती निःसन्तान भएर बसेका छन् । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूमा सन्तान नहुनुमा महिलालाई दोष दिइन्छ । तर, निःसन्तान हुनुमा महिला र पुरुष उत्तिकै भागिदार छन् । निःसन्तान हुनुमा ३३ प्रतिशत महिला, ३३ प्रतिशत पुरुष र ३३ प्रतिशत दम्पतीको कम्बाइन्ड नमिल्नु हो । तर, हाम्रो समाजमा पुरुषमा कुनै समस्या हुँदैन भन्ने छ । नारकीय जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था महिलाहरूमा मात्रै छ । कतिपय ठाउँमा बच्चा नहुँदा महिलालाई परिवार र समाजबाट घृणा गरिन्छ ।
के हो पुरुषमा हुने निःसन्तान ? -पुरुषको वीर्यमा शुक्रकीट नहुनु अथवा कम हुनु । -पुरुषको यौन क्षमता र यौन चाहना कम हुनु । -पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध गर्न सक्ने क्षमता नहुनु अथवा शारीरिक सम्बन्ध राख्न नसक्नु । -शारीरिक सम्बन्धको वेला स्खलन नहुनु अथवा शुक्रकीटको कमी हुनु । -धेरै महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध राख्नु । -खानपिन नमिल्नु । -कसिलो अन्डरवेयर प्रयोग गर्नु । -गह्रौँ काम गर्नु ।
महिलामा कसरी हुन्छ निःसन्तान ? -महिलाको पाठेघर डिम्बाशयमा खराबी हुनु । -महिलामा कुनै जन्मजात वंशाणुगत रोग । -डिम्ब ननिस्कने रोग । -महिलाको शारीरिक विकास पूर्ण रूपमा नहुनु । -पुरुषको भन्दा महिलाको शरीर धेरै स्ट्रङ हुनु । -पाठेघरको विकास भएर डिम्ब निस्कने नलीमा खराबी हुनु वा विकास नहुनु ।
निःसन्तानका कारण -पौष्टिक आहारामा कमी अथवा खानपिनको कमी हुनु । -महिलामा सानो उमेरमा हुने यौन शोषण । -पुरुषसँगको अनैतिक सम्बन्धबाट रोगहरू लागेमा । -पाठेघरमा हुने टिभीका कारण पनि बच्चा जन्मन सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १२, २०७४ समय: ८:२५:१६